Izindaba - Isikhathi Sokuvuna Semakethe yaseYurophu
I-Swamp Bulldozer TS160-3
Ixhaphozi Bulldozer TYS165-3
Ixhaphozi Bulldozer TYS230-3
ISwamp Bulldozer SD7N LGP
ISwamp Bulldozer SD6K LGP
ISwamp Bulldozer SD7K LGP
Imisebenzi eminingi ye-Bulldozer TS165-2
Imisebenzi eminingi ye-Bulldozer SD7LGP
Isondo Loader XG938G
Isondo Loader XG955T
Ukubhola Rig TY370
Ukubhola Rig TY380T
Umlimi Wokushayisa Nokukhulula
Isisetshenziswa Seqhwa Neqhwa
Isicoci seqhwa SG400
Izinto zokwakha ezansi
Isikhathi Sokuvuna Semakethe YaseYurophu
In eminyakeni yamuva，I-HBXG bekulokhu kuqinisa intuthuko yezimakethe zaseYurophu. Eminyakeni engama-20 edlule, thinakugcinwe ukuvakashaing izimakethe ezisemqoka eYurophu futhi umhlangano amanxusa anamandla uku xoxa i izinhlelo zokubambisana zesikhathi eside. I-HBXG yenza okuningilungisaments of i imishini kanye nokusebenzas ye i imikhiqizo ngokwezidingo zamakhasimende ezimakethe zaseYurophu, futhi kancane kancane yazuza ukwethenjwa EYurophu amakhasimende ngenxa yokugwazwaizinga nokusebenza kwezindleko eziphezulu kwemikhiqizo yethu. Sine sasinezethu amanxusa kanye namakhasimende athembekile. Okwethu ivolumu yokuthengisa yaqhubeka yanda unyaka nonyaka, futhi I-HBXG kancane kancane sandise isabelo semakethe eYurophu.
Kusukela kwaqubuka i-COVID-19 ngo-2020, imakethe yase-Europe ngokujwayelekile ibithinteka kumazinga ahlukahlukene. I-HBXGwahlaziya ngokucophelela isimo sangempelas yemakethes, izisebenzi ezisiziwe ukuqinisa ukusakazwa kwenethiwekhi, zizamile thuthukisa izinsizakusebenza ezintsha zamakhasimende, nokuqinisa ukwakhiwa kwamandla ezinsiza, ukwakhiwa kohlelo lwe-ejenti kanye nokwakhiwa kwezingxenye zensiza. Ngakolunye uhlangothi, i-HBXG promoted umsebenzi wedijithali nohlakaniphile ukwenza ngcono ukusebenza kahle komsebenziies. Futhi thina ngcono njalo ikhwalithi nejubane lemikhiqizo, ukukhiqiza, insizakalo, ukuze ukuhlangabezana kangcono nezidingo zentuthuko yebhizinisis.
Ngenxa yemizamo engapheli, imakethe yaseYurophu igcine ukukhula okuzinzile kulo lonke lolu bhubhane futhi kancane kancane iyavuna isikhathi. Kusukela ngoJanuwari kuya kuSepthemba ye 2021, I-HBXG igcine ukuthunyelwa kweqoqo elijwayelekiles emakethe yaseYurophus, okuyi kukhona kulindeleke ukuthi ivule imakethe ebanzi yenkampani futhi ilethe indawo eyengeziwe yokukhula.
Yize izinga lokukhiqiza lilonke kanye nokuncintisana kwemikhiqizo yethu emakethe yase-Europe bekulokhu kuthuthuka kule minyaka edlule, I-HBXG namanje has igebe elithile kusuka ezingeni eliholayo lomkhakha. Njengenjwayelo,I-HBXG izolwela ukwenza ngcono izinga lemikhiqizo nezinsizakalo, njalo thuthukisa ibhizinisi lokuthekelisa, futhi ulwele imakethe enkulu yaseYurophu ngesisekelo sokuhlanganisa amakhasimende okuqala.
Isikhathi Iposi: Sep-30-2021
21 Dongsheng Road, Xuanhua, Isifundazwe saseHebei 075105, PR China